Wasaaradda arrimaha dibadda Baxrayn oo Canbaraysay qaraxii Daraad ka dhacay Muqdisho. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasaaradda arrimaha dibadda Baxrayn oo Canbaraysay qaraxii Daraad ka...
Wasaaradda arrimaha dibadda Baxrayn oo Canbaraysay qaraxii Daraad ka dhacay Muqdisho.
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Baxrayn ayaa waxaa si kulul looga hadlay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee maalin ka hor ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada Macalin Nuur.
Previous articleXisbiga Kulmiye ee haya talada oo eedayn u jeediyay Xisbiyada Midoobay ee UCID iyo Waddani
Next articleTaliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliya Jeneral Zakiya Xuseen oo qortay sheeko ku aadan Guurkeeda.
Wararka ka imaanaya Gobolka shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan Al-shabaab ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay tuulo hoostagta degmada...
Waan waan laga dhex waday Ra iisal wasaraha kumeel Gaarka iyo...